Edu Student Guide — MYSTERY ZILLION
Edu Student Guide
September 2008 edited September 2009 in Project
Edu မှာ ဘယ်လိုစာ စသင်ရမှန်းမသိသေးတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက် ebook လေးပါ
မရဘူးဗျ... 4share က ဘန်းထားတယ်ဗျ............
ok ပြန်တင်ပေးမယ်ဗျာ။ ADrive မှာ ပြန်တင်လိုက်မယ်။ ခဏစောင့်။
စောင့်လဲပြောသေး သူ က out သွားတယ်။အနော် လဲအိပ်ချင်ပြီ..bye bye.........
MZEDU_Student_Guide.rar - ADrive
MZEDU_Student_Guide.rar - Filesend
သွားလူဆိုး... ဒီက တင်ပါမယ်ဆိုမှ.. အမြဲတန်းလက်ဦးအောင်တင်တယ်...
google chrome တုန်းကလည်းဒီလိုပဲ... လုပ်ထားပေါ့.. connection ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာနေတာကို... :14:
ကဲ... ကျွန်တော်ကလည်း နောက်ကျပေမယ့် အားနာပါးနာနဲ့ ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် :77:
သွားလူဆိုး... ဒီက တင်ပါမယ်ဆိုမှ.. အမြဲတန်းလက်ဦးအောင်တင်တယ်... :d
ကိုစေတန် နဲ့ ညီကြီး dR တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Thanks ပါ saturngod နဲ့ dR.cARBOn
အဆင်ပြေသွားပြီ ... ဖတ်ပြီးသွားပြီ ...
ရသွားပြီ။ study guide ဖတ်ပြီး ကိုစေတန် course မှာ၀င်တက်နေပြီ။ assignment တော့နည်းနည်းစောင့်နော်။:D:D
Hi I can't read myanmar font in the http://edu.mysteryzillion.org/ site. I can see myanmar font in the http://www.mysteryzillion.org.
ကွှျန်တော် MZEDU မှ lesson page ကို firefox browser မှ save လုပ်ပြီး ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါ font တွေက မမှန်ဘူး ဖြစ်နေလို ့ပါ။browser မှာ ကြည် ့တဲ့ အခါ အဆင်ပြေပြီး page ကို save as နဲ့html အဖြစ် save လုပ်ပြီး ပြန်ဖွင့် တဲ့ အခါ ဖြစ်တာပါ။pdf နဲ ့ဆိုရင်တော့ ကောင်းမယ်နော်။ဆိုင်မှာ save ပြီး အိမ်ကျမှ ပြန်ဖတ်ရတာ မို ့လို ့ပါ။နောက်ဆုံး page ကို screen shot လုပ်ပြီး ဖတ်ရတယ်။ကူညီပါအုံးနော်....
MZ edu မှ တာ၀န်ရှိသူများခင်ဗျား ..
အခုလက်ရှိ enroll လုပ်ခွင့်မရသေးသော Course များအများအပြားကျန်ရှိနေသေးသည်ကို ဖြေရှင်းပေးစေလိုပါသည်ခင်ဗျား ........။
ကျွန်တော် MZ မှာကျောင်းတက်ချင်လို့။
အခုလောလောဆယ် guide ကဒေါင်းလော့လုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။
အဲဒါ ဒေါင်းလော့လင့်လေးတွေ ပြန်စစ်ပေးပါဦးနော်။ :6:
ူLink သေနေပြီဗျ ပြန်တင်ပေးပါဦး ifile သို.မဟုတ် mediafire မှာ :D:D:D:D
ူlink သေနေပြီဗျ ပြန်တင်ပေးပါဦး ifile သို.မဟုတ် mediafire မှာ :d:d:d:d:d
ဒေါင်းလို ့မရလို ့ပါခင်ဗျာ
ebook က သုံးမရတော့ပါ။ အဲဒီစာအုပ်က ဟိုးအရင်က စာအုပ်လေ။ လက်ရှိ system အတွက် မဟုတ်တော့ဘူး။
ကောင်းေ၇ာဟာ နာ့မှာတော့ ကြိုးစားပမ်းစားဒေါငး်ဖို့ဆို ကျော်ခွနေတာ ဟင့် ဟင့် ဒိတ်အောက်နေပြီတဲ့
အဟီး.. နော်လည်း ဇွတ်ဒေါင်းနေတာ..
သင်တန်းစာရင်းပေးချင်ပါတယ်.. သင်ယူသူ အနေနဲ့ပါ..
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ .. ပြောကြပါဦး...
MoeKyar wrote: »
ဘယ်လိုမှ မလုပ်ပါနဲ့ လောလောဆယ် ခဏပိတ်ထားတယ်တဲ့ ဒီမှာ
အဲဒါတဲ ့..အဟင် ့:2::2::2::2:
See Carefully Zu Zu. Go and see there. :P:P:P
ဟုတ်.. စာရင်းတော့ သွင်းပြီးသွားပြီ... သင်တန်းတွေ ဖွင့်တော့မယ်ဆို ပြောကြပါဦးနော်...
မသိလိုက်မှာ စိုးလို့... :)